Ọnọdụ Forex Trading Site na FXCC | Ndekọ Forex & Platform Ọnọdụ | Exchange Currency
Home / trading / Nnabata / trading Ọnọdụ
Ọnọdụ FXCC Forex Trading
Ndị ahịa ahịa na-aga nke ọma chọrọ mgbanwe dị iche iche na-azụ ahịa na trading. Ọnọdụ azụmahịa anyị na-eme ka anyị nwee ike ịmepụta ma na-emeghe ahịa na-ere ahịa na akaụntụ niile anyị nwere ma na-enye ụlọ ahịa nke ịzụ ahịa. Tebụl dị n'okpuru na-akọwapụta atụmatụ ndị dị na XL, Standard na Advanced accounts.
Izu Ike Ị nwere ike ijikọ ọnọdụ gị, mana mara na nkwụnye ego akaụntụ gị ga-agbaso ihe ndị dị mkpa ka ị nwee ike ịmechi otu ma ọ bụ karịa nke ọnọdụ dị elu. Enweghi ike ịkọcha akaụntụ zuru ezu ka Kwụsị. Ọ bụrụ na nzaba akaụntụ gị ruru ọkwa dị ala ma ọ bụ n'okpuru maka ihe ọ bụla (dịka obosara gbasaa ozi ọma ma ọ bụ nkwụsị ụda), a ga-emechi oghere gị na-akpaghị aka. FXCC nwere ikike ikpuchi ma ọ bụ akụkụ nke ọnọdụ dị elu iji zere ihe ize ndụ nwere ike ịdaba na njedebe na-ezighị ezi n'ihi mgbasawanye sara mbara; nke a nwere ike itinye na Akaụntụ na-enwe nnukwu ego nke ọnọdụ dị elu na oke nha nha.
Ogologo Ụgwọ Ọrụ 0.01 Lot 0.01 Lot 0.01 Lot Obere azụmahịa na ntanetị na ike na ngosipụta bụ nza 0.1
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ A na-egbu ndị ahịa niile n'ahịa ahịa Inter-bank site na iji STP (Nhazi Nhazi)
Ahịa ahia Ị nwere ike itinye ndụmọdụ nke ọkachamara ọkachamara na MT4 maka usoro ịzụ ahịa gị
Nkwa oku di elu 100% 100% 100% Ozugbo akaụntụ gị rutere ọkwa Ngo nke 100%, a ga-eme ka ị mara
Kwụsị Ọkwa 50% 50% 50% Ozugbo akaụntụ gị ruru ọkwa ọkwa ruru nkwụsị ọkwa ma ọ bụ n'okpuru, usoro ahụ ga-emechi ọnọdụ niile mepere emepe gị. Ekwesịrị iburu n'uche na anyị nwere ike bulite ọkwa nkwụsị Kwụsị, dịka FXCC si dị mkpa.
trading nyiwe MetaTrader4 MetaTrader4 MetaTrader4 FXCC Meta Trader 4 & FXCC Mobile Trading
Ngwa ego 28 Currency Pairs Gold, & Silver, Lee ndepụta zuru oke 28 Currency Pairs Gold, & Silver, Lee ndepụta zuru oke 200 + Financial Instruments, Lee ndepụta zuru oke Biko kpọtụrụ onye na-akwado anyị maka ozi agbakwunyere.
Deposit Cash USD, EUR & GBP USD, EUR & GBP USD, EUR & GBP Ego ị nwere ike denye aha gị na
Re-Quotes Enweghị Mkpuchi Njirimara pụtara Nwee Ihe Ntughari
Ụdị ọnụahịa Nkọwa ọnụ ọgụgụ 5 Nkọwa ọnụ ọgụgụ 5 Nkọwa ọnụ ọgụgụ 5 Ihe Nlereanya: 0.12345
Nkwụsị na-akwụsị 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Pip si na Market Market, ntụgharị Ị nwere ike idebe Loss ka ị na-agbasa.
Nnukwu & ọnụ ala Ọnụ ọnụ ego Ọnụ ọnụ ego Ọnụ ọnụ ego Ọnụ ala & ọnụ ala dị na Chart na Market Watch na-akwụ ụgwọ mgbe niile. Ya mere, mgbe ị na-ejide ọnọdụ a na-ere, a ga-egbu Ọnwụ Kwụsị gị na elu karịa ọnụego elu ederede na MT4 Market Watch ma ọ bụ Chart.
kacha nta ego 100 USD 10,000 USD 100,000 USD Ma ọ bụ Ụdị ego dị iche iche
Ịkwụpụ nke nta 50 USD 50 USD 50 USD Maka Ụdị Ụdị Ntuba
leverage 1: 1 - 1: 300 1: 1 - 1: 200 1: 1 - 1: 100 - Ikike nke Gold & Silver bụ 1: 100 maka akaụntụ niile.
Commission * ZERO FX: 0.75 pip a n'akụkụ
Akara: $ 7.5 n'akụkụ FX: 0.4 pip a n'akụkụ
Ngwongwo. Ike & Ama: $ 4 n'akụkụ Biko rịba ama na maka ndị ahịa nke 3rd kwadoro, a ga-etinye ego ịkwụsị na XL Accounts. Ọ bụrụ na a na-etinye ego ahụ, FXCC ga-ezitere ndị ahịa ahụ ka ha nwee ike ịmepụta ọrụ ahịa ọ bụla na akaụntụ ahụ.
Tụgharịa Biko rụtụ aka na Rollover page maka nkọwa ndị ọzọ.
usoro & ọnọdụ emetụta
FXCC Forex Trading Hour
Ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị maka ahia bụ site na 17: 05 ka 16: 55 New York Time (EST) site na Sunday ruo Friday nke yiri 00: 05 ka 23: 55 Server Oge, Monday ruo Friday, ma e wezụga 25th nke December na 1st nke January. N'ụbọchị Izu ọkụ na-abanye oge anyị arụ ọrụ na oge nkesa na-agbanwe dịka oge New York (EST).